MUUQAAL: Gabadh uu C.wali Gaas ka Seexan waayey Kadib markay sheegtay Sir-Badan iyo Duulaanka Imaaraadka ! | Kalshaale
MUUQAAL: Gabadh uu C.wali Gaas ka Seexan waayey Kadib markay sheegtay Sir-Badan iyo Duulaanka Imaaraadka !
Oct 13, 2017 - 24 Aragtiyood
Nairobi (Kalshaale) Safiya Yaasiin oo ah Gabadh Aqoonyahanad ah oo kasoo jeeda deegaanada Puntland ayaa siwayn uga hadlay Xaalada ay Soomaaliya marayso Xiligan, waxayna soo bandhigtay duulaanka Qaawan ee Dawladda Imaaraadku ay kusoo qaaday guud ahaanba dalka, waxayna soo Bandhigtay Arimo badan oo Bulshada Qaarkood ka Qarsoonaa.
Dhinaca kale waxay siwayn u dhaleecaysay Go’aanka Hogaamiyaha maamulka Puntland oo ku Wareejiyey Dekedda Boosaaso, waxayna sheegay inuu Laaluush Badan siiyey Qofkii Arintaasi isku daya inuu ka hadlo, Waxayna wax laga Naxo ku Tilmaantay sida uu u dhaqmay Hogaamiyiihii loo Hanwaynaa ee dalkiisa u iibsaday.
Waxay Xustay Shaqada uu imaaraadku u dhiibay Cumar C.rashiid oo Horey loogu eedeeyo inuu Badda Soomaaliya Muran geliyey oo iibsaday, waxayna Bulshada Soomaaliyeed la wadaagtay Dar-daaran adag.
Akhyaarta ra'yigiina halkan ku qora (24)
Naa caruurtaada korso oo koley meelahaas baad qoxooti ku tahee caruurtaada Gaalada ka ilaasho siyaasad anaga ha nooga sheekayne xaajigaaga aqalka u firaash caruurtana casharka ka caawi.
FB baa umadii waalay 24/7 fb baa laga darooryi waxa laga hadlayana lama yaqaan.
Gabadhu waaa qurux badan tahaye yaanay idin dhaafin budh cad badeedan sheegayas..
Tanoo kaleh waabaa adoo hellay kaluun bada kasoo booday oo u gooyay af bear!
Qosol Kalshaale media! Kkkkkkk
Gaas baa naag ka hurdi waayey!!
Naagtu fikirkeeda xorbay u tahay oo anaa difaacaya in qof walba oo Somali ah fikirkiisa sheegto, laakiin waa uun fikir, wax kale maaha.
Cali Daacuun ayaa yaabay! Give me microphone.
Allow maxaan arkay Islaan Majeerteen oo qiiro Japan wadanimo la ordaysa! Naa waxbaro oo caruurtaada u shaqayso.
Hadda ka hor waxay lahayd, Puntland nin waalan baa la doortay hadduu bada nagu darin! Kkkkkk
Waxay ku leedahay dadkii gaajo haysa horumarintana waa diidan tahay!
Doqonimadeeda dekadda Bossaso Emiratka ma tuurta ayey ku qaadan marka la dhiso! 30 sano laga kireeyey maxay! Waa waqti aad u yar!
Naagtaas waa Majeerteen dadkeedii Facebook ha lagaa sheego ka dooratay!
Siilka qori kaa mud!! Kkkkkkll😝
Emirateka ruuxiisa ayaa dhisay sow dad maal gashaday ma dhisin! Ma oga miyaa dadka degen UAE in 86% oo offiel ah in ajnabi maal gashaday oo macal Somalia hotello iyo business ku leeyihiin.
Daaraha dhaadheer ee Dubai ajaanib ayaa leh, laakiin Dubai ku yaaliin ma tuurta ayaa ku qaadan markaad doonto.
14% Emiratin yihiin!
Somali Lacag dhulka ku horumariyaan ma haystaan, dekedda New York oo aduunka ugu weyn waxaa 40 sano kiraystay DP world. Google, New York port.
Bal ii sheega lacagta New York wayday oo dekedii DP world ku wareejisay, Berbera ama Bossaso ka khasaaraya, haysteen oo laga dhacayaa!
Fucking cawaan, kulli microphone la ordaya!
Jaahil walba dhulbaa la iibsadey ha ku hayo, yaa idiin joojinaya! Aqoon la’aan waa iftiin la’aan,
Shacabka Emiratka waa 2 million oo qof kuligood ma Somalia ayey qabsan karaan, in siyaasad ahaan maskaxda lagaa qabsado taas waa mid kale oo u baahan in dadkaaga waxbarto, wadankana democracy yahay oo dictator u kiraysan haysan weligiis.
4 sano kadib haddii laga shakiyo la keeno nin ka fikir duwan.
Trump waxaa loo doortay, we are’t winning anymore, iyo make America great again.
Mojority waxaa la yiri okay! Na tus; you are a winner, and make us great again..kkkkkkk
Somali siyaasadda iska hagaajiya, dhulka iyo maalkii la geliyo guuri mayaan.🇸🇴🖐🇸🇴
Waa in uu gudoomiye u magacabaa gobolada jubooyinka oo xaruntiisu tahay gabarhaarey.
Waa in dawladu u qaramaysaa ciidan col bare hiirale kismaayo iyo agagaarkeeda.
Waa in si dagdag ah dawladu u magacowdaa labada shabeele iyo banaadir gudoomiye cusub ( governor) iyadoo loo sii Gogolxaadhayo maamul Gobaleedka Banaadir state.
Waa in ay dawladu Soo xero galisaa maamulka suufiyada ee dhuusomareeb fadhiya Iyo guriceel qiimo kasta ha ku kacdee
Waa in sool Iyo sanaag iyo dagmada buuhoodle dawladu aqoosi buuxa siiso.
@WAXAAN JECLAYSTAAN IRAAH “anaa qoray” hadda ma aqaan goortaan qoray ràyigaan.
■War yaa iga huba inuusan Fardojaan ahayn Khaatumo Cerigaabo?. Si kastaba Khaatumo Cerigaabo wuu ila ekaa nin saan wax u qorikara Markuusan CAAYTAMAYNE. *Reer Barxadda, ku arkimaysid mid jawaab ku siiya ama ku yiraah ‘War qaldanide godkaan haku dhicin’ faanka qabiil & caydana waa ku dararaan. WBT
Adeer; warkaan waxaa qoray Dabshid!
Ma ahayn Fardojaan. Ceerigaabo Khatumo waa SOmalilader kkkkkkllll.
SOmalilander peace! Kkkkkkk
Fardojaan meel uu ku qoray hadaad aragtay wuxuu ka kobiyeeyey Dabshid, mise Dabshid baa kopy ahaa.
Aniga in Dabshid qoray ayaan arkay!
Anyway: waa war hot air ah, Taas waa New civil oo dib u bilowday, this time Dabdhid ku guban!!
Abwaanka Cabdi Aaden ‘Qays’ ayyaa yiri; “Adduunyadu Kuktay IL ku leedahay, nin caadiya-hay la boodda DAF oo kor la aada, waxay siddaba markay KUKTA marinayso ayyay ISHU aragtaa Markaasey intey soo tuurto tiraah KANI KAYGI MA AHA” waxaan ka wadaa Axmed M/med Islaan Kuktuu ii saarna Fadhi-Ku-Dirir badana waan ku daafacay Haddana waxay iga taagantahay KAYGI MA AHA.
Axmed Madoobe kama filayn inuu curyaaminta Qaranka hormuud ka noqon, gartay inuu cabsaday oo uu isyiri DUUFAANTI qaaday Ina Cali Cosoble & Axmed Xaaf armay adna ku Dafta BALSE waxaan qaba inuu noqon lahaa kan ugu dambeeya oo BOQORTOOYADA waaya.
♧Waxaan cafis weydiisana Suldaan Cali Zubeer oo wax badan nooga digay Axmed Madoobe Balse aan ka Dhega adkaysanay. WBT
Waxaan kula talina Farmaajo/Khayre inaysan xiisadaha & degenaasha làaanta ay wadaan haraagii Qabqabla-yaasha dagaal, Dheg u dhigin ayna ogaadaan inay kalsoonida Shacabka haystaan.
☆Bulshada rayidka waxaan ka sugayna inay bannaan bax lagu taageera Dawladda loogana soo hojeedo QABQAB-LAYAASHA jadiidka ay ka dhigaan XAMAR, maadaama uu deganyahay shacab ka badan KAAN 4gobol. WBT
Waar gabadha haloo sheego inay Caruurteeda ilaashato,waaba mid nuuraysa.
Midbaa iga qoslyay Ayaan hore.
Wuxu yidhi Islaan Mjeeteen ah oo adhi la joogta meel cilo ah ayaa aragtay gaadhi xamuuul ah oo meel ka dheer soo socda.Islaan dariiqii gaadhiga ayay is dhextaagtay oo maro cas ayay lushay:” waar hooy,waar hooya”!!
Dadkii Gaadhiga watay ayaa naxay oo waxay moodeen qof wax ku dhaceen oo gaadhigii ayay joojiyeen.
Islaan ayay la hadleen ama iyadii ayaa dadkii la hadashay.
“Eedo idinkaa ka yimid magaaladii Gaalkacayo e Bbc-dii maxay sheegetay?”
Dadkii oo yaaban ayaa eeyar iska dhaqaaqay.
Gabadhaan waxaan u maleyn reer Nimaace ayaa reer abti u ah, Allow caafimaad na sii.
Maxaad dhahdey MJ ayaad u qirtey wax qabad, nacasyahow saaxiibada ugu badan Aabahey waa MJ C/risaaq X. Xusseen wuxuu ahaa adeerkey camal, xataa Xassan Abshir kama bixijirin Guriga, Diiriye sidoo kale, Nuura-Diin aabihiis (Ex Buraashadley Bakool).
Cawaale wuxuu ahaa ardey iska joogo USA laakiin wadani ahaa, lamuuna socon wafdiga C/llaahi Ciise.
Keenadiid aa xoreeyey Xamar, mayee Sayidkii ayaa xoreeyey, Talyaaniga ayaa dabaal bari jirey,waxyaabo kalena waa lagu xantaa. Ciddii MAHIIGO wax ka dayey miyaa Cafin Talyaani Cadde.
Gabadh gobeed oo u baahan inay iska hubiso wax badan
Mahadsanid haddaad garatay Axmad Madoobe inuu yahay waran laba afla ah oo ku soo baxay nifaaqii iyo khiyaanadaan ka digi jiray.
Waddan iyo wanaag raadis baad ahayd laakiin innaga nama khiyaamayn karin Axmad madoobe
Maanta wakaa bedka is keenay
Down all Amhara lovers
Akhyaarta Barxadda, markaan JAW ii Qalleeya haddaan ku hadlo luuqadi Jugle & Laalays.
😠Ama badnaada ama yaraada ee BAL Somali wey istaqaane Kaalaya M&M wax ka qaada inkastoy F&Kh ay yihiin SYL oo aysan cidna garab-weydisanayn. WBT
Haddaan ku dhaho waxaa i dhaley, odey Amaadi oo Xalane Askari Tabo Bare ka ahaa , maalin dhaweydna ku dhintey Nairobi AUN, waxaan la dhadhey Fowsiyo Amaadi, miyaad iska rumeysan.
War nin Gabyaa ah qofkasto ayaa yaqaano oo sheegankaro, ( ninkaan wiil ciideed aniga i weydii).
Ogaadeen ayaa ugu badan ee kakaca Meesha, Bare Hiiraale hurgufaayey, adeer Bilish Bilish Bari dad uma eka.
Miyaan kaaga sheekeeyey Midkii reer Cabdille ee Xamar lagu maxkamadeeyey,
Markii la xukumey ayaa la dhahey
maxaad maxkamadda ka codsan, kuye intiinaan oo reer Cabdullaa waxaad isku raacdeen waxba kama qabo (dadkii maxkamadda,qaaligii askartii dhamaan waa u reer Cabdulle).
Reer BARI waa xeelado Badanyahiin ( sida Xaange wiil ogaadeen).
Ma deris baad tihiin ilmo weerar Amaadin oo tababara aabahooda ka ahaa Xalane back 70s.
Abdirizak weerar Amaadin
Runtii waa sheeko qurux badan oo rag aan ku jiro adag tahay inaad ka gaddo
Laakiin Wiil ciideed waxaan idhi based on what he post. Malaha way kaa hoos baxday markii aan waydiiyay bilo hore, Wuxuu yidhi Ina Cumar dage ayaa awoow ii ah
Anigu halkaas baan ka duulayay.
Sidaan hadda ka hor kuugu idhi waar Dabshidow waagaan ku doodi jirnay Allgalgaduud waxaad ahayd Sheekhaal oo tidhi kama doodin halkaasi sheekhaalna ma ihi bal adiga iyo wiil ciideed isu kaaya icraaba oo sheega halkaad ka soo jeedaan.
Waxaa la yidhi af jooga looma hadlee isagu ha 8s sheego, haddii kale adiga iyo aashaada
Wiil ciideed waa Ogaadeen in my reading, just bedka keen haddii uusan ahayn
Runtii waan ku qoslay ninkii reer Cabdille ee maxkamad muqdisho la buuxo yidhi talada reer Cabdille qaatay
Qaali waa walaashey saaxiibteed ilaa Xalane,
Miyaad iska rumeysan haddaan ku dhaho waa walaashey.
War bustaha iska baar, haddii kale sida ilmo Amaadi VISA Bug ah halugu marsado.
”Walaahi Qaali Amaadi wey ka ragsantahey 100 wiil oo reer Webi Sonkoreeye ah.
Gabadhu runbeey sheegtay ee aflagadada iyo nacnacda kadaaya walee anigu waxaan aminsanahay ku wabadan oo rag isku shegaya in gabadhaanu dhaanto iyo gabdhaha lafekerkaa kkkk burcaa yaabtay walee waabaab
C/WELI WAA NIN MARAYKAN AH ok, DEKEDANA WAXAY IMAARAADKU USII BOOS CELINAYAAN MARAYKAN,MARAYKAN WAXA UU KA BAQAYANA WAA RAASHIYA IN XEEBAHA SOMALIYA AY SOO GASHO SIDII TODOBAATANAADKII,!!!!!,30 SANO GUDAHOODNA WAXAA LAGA BAQAYAA INUU DHACO WW3 DAGAALKII 3aad..
Naagtan bilaa camal miyaa awey carurtedi ama ninkedi muuqabsado belo afbalaadhan afkaga xidho o horumarka iyo wanaga soo dhaweee ciyalgana ku mashquul hadii kale Puntland cagso dhigi meysid kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
A s c dhaman labadan bari rayi ma dhiiban manta ya ka wanna saaran abdiwali gaaso gabar kalshaale hurdi wayaa kkkkk
Daawo Video: Dab Xoogan oo Sababay Khasaare Balaadhan oo Qabsaday Badhtamaha Ceerigaabo.
Ceerigaabo (Kalshaale) Dab Xoogan oo Sababay Khasaare Hantiyeed Balaadhan ayaa maanta ka kacay Xaafado ...
Daawo Video:Ciidamada Dawlada Somalia iyo Shabaab oo Ku Dagaalamay Deegaanada Jubaland
Kismaanyo (Kalshaale) Dagaalo Culus oo u Dhexeeya Ciidamada Dawlada Fadaralka oo Garabsanaya Kuwa Jubbaland ...
Daawo Video: Somaliland oo Khatar ku Sugan Hadii Ethiopia Burburto iyo Sababta
Hargaysa (Kalshaale) Qaar ka mid ah Aqoonyahanada Somaliland aya aaminsan in Ethiopia oo Burburta ...
Daawo: Codsigii Iimaan C.raxmaan ee Madaxwayne Farmaajo, Khayre & Gaas
Gaalkacyo (Kalshaale) Iimaan C.raxmaan Maxamed waa Gabadh Soomaaliyeed oo ku xanuunaysa magaalada Gaalkacyo ee ...
MUUQAAL: RW. Khayre iyo Madax ka Qayb galay Salaada Jinaasada Axmed Diiriye oo Muqdisho ku geeriyooday
Muqdisho (Kalshaale) Ra’iisul Wasaaraha xukuumada Somalia iyo masuuliyiin kale ayaa ka qeyb galay salaada ...